particular € œ म यस खास बढेको सेटअपमा कतिवटा बोटहरू फिट गर्न सक्छु? â €
हामी यो प्रश्न धेरै सुन्दछौं, विशेष गरी पहिलो पटकका उत्पादकहरूले उनीहरूको ठाउँको अधिकतम आशा राख्दै।
यो एक बुझ्ने प्रश्न हो। तपाईंलाई थाहा छ बिरूवाहरू ठूलो हुँदै जान्छन्, त्यसैले तपाईं क्र्राम कन्टेनरहरू सँगै सँगै गर्न सक्नुहुन्न। तर तपाइँ अधिकतम उपजको लागि अवसर पनि गुमाउन चाहनुहुन्न।
बुझ्नु पर्ने पहिलो कुरा यो हो कि तपाईको ठाउँको लागि plants € œrightâ plants बोटबिरुवाहरूको लागि कुनै सहि समीकरण छैन। तपाइँको बोटको आकार शाकाहारीमा बिताएको समयको मात्रामा निर्भर गर्दछ। जति लामो तपाईंले भिज्नुहुनेछ, तपाईंको बोट ठूलोमा फूलमा स्विच हुनु अघि हुनुपर्नेछ (बाहेक जबसम्म तपाईं स्वतः फूलहरूको बोटहरू विकास गर्दै हुनुहुन्छ)। केही उत्पादकहरूले धेरै ठूला बोटहरू मनपर्दछन् र 4X4 स्थानमा प्रति प्रकाश केवल एउटा बोट हुन सक्छ। अन्य उत्पादकहरूले उही ठाँउ 4X4 स्थानमा धेरै साना बोटहरूसँग एक â € € ग्रीन ea को दृष्टिकोण prefer रुचाउँछन्। धेरै उत्पादकहरूले यी दुई चरमको बीचमा केहि मनपर्दछन् जुन X x4बढ्न ठाउँमा नौ बोटका साथ हुन्छन्। यसले तपाईंलाई प्रत्येक बोटको बारेमा एक वर्ग फुट दिन्छ। स्वत:-फूल बिरुवाहरू जहिले पनि उही आकारको हुन्छन् किनकी उनीहरूको शाकाहारी अवधि हुँदैन। स्वत: फूल बोटहरू निश्चित समय तालिकाको आधारमा स्वचालित रूपमा फूलिन्छन्। स्वत:-फूल बिरुवाहरु को आकार विशिष्ट तनाव मा धेरै निर्भर गर्दछ।
हामी तपाईंको बढेको सेटअपका लागि बिरूवाहरूको सबै भन्दा राम्रो संख्या निर्धारण गर्नका लागि चरण-देखि-चरण मार्गनिर्देशनको साथ यसलाई साँच्चिकै सरल बनाउँदैछौं। प्रत्येक चरणले तपाईंलाई संभावनाहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ।
अब छलफल नहुने छलफलका साथ सुरु गरौं।
दुबै घर र व्यावसायिक बृद्धि सम्बन्धी कानूनहरू सबै देशभरि आरामदायक छन्। यद्यपि अधिकांश राज्यले अझै पनि खेतीमा प्रतिबन्ध लगाउँदछन्।
उदाहरणका लागि, क्यालिफोर्नियाको कम जनाले घर उत्पादकहरूले मनोरन्जनका लागि छ वटा बोटबिरुवा खेती गर्न सक्दैनन्। औषधी मारिजुआनाको मामलामा, तपाईं आफ्नो निवासको १०० फिट क्षेत्रमा हुर्कन सक्नुहुन्छ।
अलास्कामा, २१ बर्ष भन्दा माथिका प्रत्येक वयस्कलाई छ वटा बोटहरू राख्न अनुमति छ। यद्यपि ती बोटहरू मध्ये केवल तीनले एक पटक फूल फुल्न सक्छन्।
ब्यापारिक ग्रोथ सेटअपका लागि प्रतिबन्धहरू अझ बढी जटिल हुन सक्छ।
चरण २: तपाईंको ठूलो कोठा वा पालको आकार नाप्नुहोस्
चरण:: तपाइँ कति प्रयासमा राख्न चाहानुहुन्छ निर्णय गर्नुहोस्
अर्कोतर्फ, यदि तपाइँ घर बढ्ने सेटअप सिर्जना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यस शौकमा तपाईंको रुचिको स्तर खेलमा आउनुपर्दछ।
तपाईंसँग बढि बोटबिरुवाहरू छन्, अधिक समय तपाईं रोपाई, मोनिटरिंग र प्रत्येक दिन तपाईंको बोटहरूको हेरचाह गर्न खर्च गर्नुहुन्छ। यदि तपाईंसँग तपाईंको ठाँउ वास्तवमै प्याक गरिएको छ भने तपाईंले कामलाई अझ निराशाजनक पनि फेला पार्न सक्नुहुनेछ, किनकि पछाडि बिरुवाहरूमा पुग्न गाह्रो छ।
जे होस्, यदि तपाइँ खेतीमा बिताएको समयको आनन्द लिन चाहानुहुन्छ भने, ठूलो बाली अधिक इनामदायी विकल्प हुन सक्छ। यो वास्तवमै तपाईले यस प्रयासमा कती राख्न चाहानुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ।
चरण:: तपाईको फसलका लक्ष्य र प्राथमिकताहरूलाई विचार गर्नुहोस्
--- म फसलमा जान उत्सुक छु?
तपाईसँग भएका बोटहरू ठूलो भएमा, बढ्न चक्रले लामो लिन्छ। यो किनभने ती ठूला बोटहरूलाई शाकाहारी बढ्न, विकास गर्न, र उपलब्ध ठाउँ भर्न अतिरिक्त समय चाहिन्छ।
--- के म उच्च उपज चाहन्छु?
यदि उच्च उत्पादन शीर्ष प्राथमिकता हो भने, अधिकतम संख्यामा बिरुवाहरूसँग जानुहोस्। कलियों र एक चाँडो फसलको एक उच्च मात्रा बीच, एक उच्च मात्रा बढेको सेटअप ठूलो र चाँडै भुक्तान गर्दछ। तपाईं पनि छोटो शाकाहारी समय संग प्रति वर्ष अधिक फसल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।
यो विशेष गरी एक जीत जस्तै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ जब तपाईं यसमा जाने स्रोतहरू विचार गर्नुहुन्छ। उपकरणको लागत, उर्जा उपभोग, र समयको हिसाबले तपाईले आफ्नो पैसाको लागि बढि ठूलो धुन पाउनुहुन्छ।
--- के म विविधता चाहन्छु?
यदि तपाईं बिभिन्न तनावहरूको साथ प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले बढि बिरुवाहरू बढ्नु पर्छ।
भन्नुहोस्, उदाहरण को लागी, तपाइँको बढ्न सेटअप एक पाल छ एक एकल LED ग्रो प्रकाश संग एक 3â € ™ x 3â € ™ कभरेज क्षेत्र प्रदान। तपाईं त्यो बढ्दो प्रकाशको साथ त्यस ठाउँमा नौ औसत आकारको बोटहरू बढाउन सक्नुहुन्न। यदि तपाइँ ती परिधिहरू बाहिर प्रकाश खसेको देख्नुभयो भने पनि, यो गुणस्तर प्रकाश होइन।
कृपया लाइट अन टेक्नोलोजीबाट हाम्रो टीममा फर्कनुहोस्। हामी यहाँ सँधै तपाईलाई मद्दत गर्नका लागि छौ एलईडी प्रकाशको सही चयनको साथ साथै तपाईंको उपज बढाउँदै।
अघिल्लो:Best Practices For Growing With LEDs